Romanian mureza anotakura TAROM inotumira mamirioni makumi matatu nemasere emamiriyoni ekurasikirwa mu38
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Romanian mureza anotakura TAROM inotumira mamirioni makumi matatu nemasere emamiriyoni ekurasikirwa mu38
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Romania Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura
Romanian mureza mutakuri TAROM yakatumira kurasikirwa kweRON 172 mamirioni (EUR mamirioni 38) muna 2017, sezvo ndege yakachinja mamaneja maneja.
Gore rapera raive gore regumi akateedzana apo ndege yendege yakanyorwa yakarasikirwa, mhedzisiro yakaipa yakapfuura katatu zvakapetwa kupfuura mugore ra2016 apo kambani yakaona kurasikirwa kweRON 47 miriyoni (mamwe maEUR 10 mamirioni).
Mari inowanikwa nekambani yakadzikirawo gore rapfuura nemamwe ma4.5%, kusvika kuRON 1.025 bhiriyoni (EUR 220 miriyoni).
TAROM yakatakura vamwe mamirioni e2.35 gore rapfuura, ichiva chechina pakati pendege dzinoshanda muRomania, kumashure kwevashandi vane mutengo wakaderera Wizz Air, Blue Air neRyanair. Vatungamiriri vatsva vekambani vakamisa matanho akati wandei ekudzoreredza senge kukwereta ndege mbiri dzeBoeing B737-800 uye kuvhura nzira dzinoverengeka dzedzimba uye dzekunze.
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, ichiita bhizimusi seTAROM, ndiyo inotakura mureza uye yechinyakare inoshanda parizvino nendege yeRomania, iri muOtopeni pedyo neBucharest. Dzimbahwe rayo nenzvimbo yayo huru iri paHenri Coandă International Airport. Parizvino ndiyo yechipiri ndege huru iri kushanda muRomania zvichibva kunzvimbo dzekune dzimwe nyika, ndege dzepasi rese uye yechitatu pakureba kuyerwa nesaizi yezvikepe uye vafambi vakatakurwa.
Zita rezita iri chirevo cheRomanian: Transporturile Aeriene Române (Romanian Air Transport). Kupfuura makumi mapfumbamwe nemanomwe muzana (97.05%) yeTAROM ndeye yeRomania Hurumende (Ministry of Transport).
Mushure mekupunzika kwehutongi hwechiKomonisiti muna 1989, ndege, ichishandisa ngarava makumi matanhatu nenomwe dzendege dzemhando nhanhatu dzinokosha, yakakwanisa kuwana mamwe majeti akavakirwa kumadokero. Pakazosvika 65, TAROM yakanga yaunza ndege refu-refu kuenda kuMontreal neBangkok vachishandisa Ilyushin Il-1993 uye Airbus A62 ndege.
Munguva ye1990s, TAROM yakatsiva ngarava dzayo refu-refu dzeBoeing 707s uye IL-62s neAirbus A310s (yekupedzisira Il-62 iri kutengeswa muna 1999). Muna 2001, iyo ndege yakanzura yayo isingabatsiri mari-refu yekutakura masevhisi kuenda Bangkok neMontreal uye zvakare yakagumisa masevhisi kunzvimbo dzayo dzasara dzenzvimbo dzeBeijing muna2003, Chicago muna 2002, uye New York City muna 2003.
TAROM yakagumisa kurasikirwa-kuita mabasa epamba kuCraiova, Tulcea, Caransebeș, uye Constanța, uye yakanangisa chiitiko chayo mukushandira kunzvimbo dzakakosha muEurope neMiddle East. 2004 raive gore rekutanga rinobatsira mumakore gumi apfuura.